Top 3 Barnaamijyada in kaabta iPad
> Resource > Transfer > Isticmaal Lugood, iCloud iyo Wondershare TunesGo in kaabta iPad
Your iPad, sida xaqiiqada ah waa khasnad aad halkaas oo aad leedahay in la jecel yahay content oo ah qaab sawiro xusuus leh oo dhan, jecel yahay videos, music iyo wax badan oo ka mid ah content kale. Waa hagaag, waxan oo dhan xog muhiim u baahan yahay in ay gurmad ah si aad u xaqiijin karto in la heli karo ee Meyeydaan wax ay. Xogta in aad leedahay on your iPad badbaadi kara ama xoojiyaa.
# 1. Kaabta iPad la Lugood
# 2. Sida loo kaabta iPad in iCloud
# 3. Music kaabta, video iyo sawiro ku iPad la Wondershare TunesGo Retro
Qaybta koowaad ee doodan ka qaban doona su'aasha ah "Sidee ayaan gurmad iPad". Lugood awood u abuuraya hayaan aad iPad ay dhacdo in maalin maalmaha ka mid ah faylasha aad rabto in aad ka dib markii aad iyaga la tirtiro. Ilaa iPad lagu taageeray karo gacanta isticmaalayo tallaabooyinkan soo socda:
Ku rakib nooca ugu dambeeya ee Lugood iyo xiriiriyaan iPad la computer via cable USB ah aad;
Guji View> Show galeeysid. Under AALADAHA, guji si aad iPad.
Riix tab Kooban oo ku saabsan sare ee suuqa kala Midigta. Markaas dabadeed halkan, waxaad ka arki kartaa ikhtiyaarka " Si Computer "iyo" dib Hadda ". Iyaga Dooro.
Fiiro gaar ah: files Media aad synced ka computer ma lagu taageeray kartaa. Si songs gurmad, videos, sawiro, iwm waxaan soo jeedinaynaa in aad isku daydo Wondershare TunesGo Retro. Kaabta u iPad abuuray by Lugood ah waxaa ka mid ah goobaha aad iPad, xisaab-taariikheed, wallpapers, iyo in ka badan. Sidoo kale raad raac ah oo muusiko ah ayaa lagu iibsaday aan la heli karin in waddammada oo dhan, iyo gurmad ay u muujinayso TV oo lagu iibsaday dhacdaa kaliya ee United States.
Tani waxay qayb ka mid ah hadalkay ka jawaabaya su'aasha ah ee sida loo raad raac iPad in iCloud. iCloud taageeray ilaa inta badan xogta ah in aad ka qabto iPad socda macruufka ah 5 ama ka dib. Wixii taageero aad iPad on iCloud ah, in aad raacdaa habka fudud ee hoos ku siiyo.
Connect aad iPad la WiFi. Tag ah "Settings" tab ka dibna riix badhanka "iCloud". Next aad u baahan tahay in ay doortaan "kaabta iyo Kaydinta" ee doorasho. Hadda qalab aad ayaa loo xoojiyaa on iCloud oo waxaa loo socon doonaa maalin kasta ilaa iyo inta:
Waad haysan qalab ku xiran internetka iyadoo la isticmaalayo Wi-Fi
Waxay ku xiran tahay in il awoodeed oo qaar ka mid ah
Screen xiran yahay
Ma waxaad badiyay aad music, sababtoo ah dayactirka kombiyuutarka ah, nidaamka dib ama sabab u ah shil Lugood? Rabto in aad playlist in loo wareejiyo computer kale? Ma ahan heshiis weyn dambe sababtoo ah Wondershare TunesGo Retro waa software iPad ee kaabta oo kuu ogolaanaya in aad si fudud ku wareejiso videos, music, Podcast, playlists ama U ah Lugood ka iPad in ay Lugood ah.
Isku day Wondershare TunesGo Retro lacag la'aan ah hadda!
Si gurmad music, videos, playlists, iyo sawiro ku iPad ah si aad u computer ama Lugood Library la TunesGo Wondershare, waa inaad raacdaa tallaabo hoos ku qoran:
Download iyo rakibi Wondershare TunesGo Retro on your computer. Markaas xiriiriyaan iPad la your computer via cable USB ah.
Burcad Wondershare TunesGo Retro oo muujiyaan doonaa iPad in ay suuqa kala weyn. Laga soo bilaabo halkan, waxaad ka arki kartaa dhowr ah si ay gurmad deg deg ah u helaan aad music iPad. "Si Lugood" kuu ogolaanaya in aad nuqul ka playlists iyo heeso ka iPad in aad Lugood Library. "Si gal" waxaa loola jeedaa aad awoodo gurmad aad music iPad in gal on your computer. By galaan guddi ay gacanta nooc kasta oo file ah, waxaad sidoo kale ka arki kartaa qaababka in gurmad aad iPad.
Isku day Wondershare TunesGo Retro (Mac) si ay gurmad aad iPad on Mac hadda! Haddii aad leedahay PC Windows ah, waa in aad isku daydo Wondershare version TunesGo Retro Windows.